- Adiana 50cm x50cm eo ny fototra, 50cm ny habehany ary 50cm ny halaliny, manodidina ny toerana asiana ny tamboho rehetra.
Raha tany mafy dia 40cm eo ny halaliny dia mety.
- Manao béton de propreté na béton de forme tsy misy vy anatiny aloha ampitovy niveau ny toerana sy ampadio tsy hikasihan'ny béton armé tany.
Atao 10cm eo ihany ny teviny.
Dosage maivamaivana 150-200Kg/m3:
– 200 kg de ciment par m3 na 4sacs ciment
– 700l fasika (0/5mm) na 0.7m3 latsaka eo
– 900l vatokely (5/15mm) na 1m3 latsaka
– 125l rano
Azo tsotsorina ihany koa hoe
1 ciment (famarana)
3 na 4 vatokely
Fikajiana ny hadiry:
Raha 50cm ny sakan'ny fototra ary 10cm ny atevin'ny béton de propreté dia amin'ny 1m halavan'ny tamboho izany
Volume béton propreté= 0.50 x 0.10 x 1 = 0.05m3/mètre linéaire tamboho. Ka raha 100m ny manodidina ny tamboho dia 100 x 0.05m3 béton dosage 200kg no ilaina = 5m3 béton vita.
- Eo ambonin'ny béton de forme no ametrahana ny béton armé
Misy karazany roa no azo anaovana azy. Na isaky ny poteau izay mielanelana 4-5m eo dia manao semelle isolée, izany hoe tsy atao mitohy lavabe ny béton armé ao ambany fa manao fototra mitokana isaky ny poteau. Na ampiraisina hifamatotra avokoa ny fototra, io ilay semelle filante. Izany hoe maka fer 10 elanelanina 20cm manaraka ny halavan'ny tamboho, dia asiana fer 8 manapaka azy isaky ny 20-30cm.
Dia béton 20cm ny teviny.
Somary mandany io, fa izy no mafy raha somary atahorana ny tany ao ambany, satria na misy mihotsaka kely aza ny ao ambany kohan'ny riaka, dia ilay beton tsy mihetsika eto ambony, lasa toan'ny poutre izy mibaby ilay rindrina tamboho eo amboniny, dia tsy mitriatra ny tamboho.
- Vita ny béton armé, dia alahatra eo amboniny ny rary vato 40-50cm miakatra, ary 40 -50cm ny sakany na ny teviny.
Totofana tany hilevina io rehetra io, ary misy 20cm eo ny vato miseho ety ambony miaro ny riaka sy ny rano.
Ny rindrina mora tsofin'ny rivotra ka dia tsy maintsy asiana poteau béton armé 20cx20cm ny habehany ary 2.5-3m ny haavony arakaraky ny haavon'ny tamboho, asiana poteau isaky ny 4-5m manodidiana ny tamboho.
(Halavan'ny tamboho - halavan'ny vavahady)/4m +1 + miampy ny poteau 2 mitondra ny vavahady.
Matetika atao rarivato io poteau 2 mitondra ny vavahady io, fa tsara raha atao béton armé ao anatiny fa fonosona vato. Ny tsara indrindra dia rariana ilay vato asiana lavaka 20x20cm ao anatiny, atao coffrage tenany izany ilay vato manodidina.
3 - Ny rindrina
- Na atao biriky mur 22, dia 100 biriky tanimanga isaky ny m²
Izany hoe isaky ny mampiakatra 1m miakatra dia 100 x halavan'ny tamboho. ny biriky ilaina.
Ohatra 100m ny tamboho
biriky miisa 100 x100 = 10 000 biriky izany mahatafakatra tamboho 1m manodidina, ka raha 3m ny haavon'ny tamboho dia 10 000 x 3 = 30 000 biriky izany no ilaina.
- Raha parpaing 20x20x40
Parpaing 5 mahavita 2m linéaire miakatra parpaing 1. Parpaing 50 izany mahavita 4m². ka 1m² izany mila 12.5 parpaing.
Raha ilay tamboho 100m hiakatra 3m ny haavony izany dia 100m x3m =300m² x 12.5 parpaings = 3 750 parpaings no ilaina.
Ahoana fanamboarana parpaing
dosage 3 sy 1 tsy atao be rano.
ciment 1sac, fasika 3 sacs ciment fenoana tsara.
1 sac ciment mahavita 25-30 parpaing eo. Mpiasa iray mahavita 30 parpaings, mahalany io 1 sac ciment eo isan'andro raha miasa milamina, mety mahavita 50-60 na 2 sacs ciment raha mavitrika, fa mafimafy ihany izay, satria manenjika parpaing iray isaky ny 15min izay raha miasa 10h/jour.
Toa ny trano ihany, tsy maintsy fehezina manodidina ny rindrina. Raha somary malemy ny ambany, ary avo ny tamboho, indrindra fa nanao semelle isolée, dia asiana ceinture intérmediaire, izany hoe tsindriana béton armé, fer 10 roa ihany eo afovoany, asiana épingle fer 8 manapaka azy isaky ny 20-30cm, mampifamatotra amin'ny poteau rehetra manodidina.
Rehefa vita ny tamboho, dia misy ceinture béton armé farany manindry azy rehetra 15-20cm eo ny teviny, vy roa fer 10 - épingla fer 8 ihany. Raha tena atahorana vao atao vy 4 ao anatiny.
4 - Lalotra
Lalorina tsara ny tamboho, na asiana rary ciment isaky ny elanelana biriky, raha tiana ho gasy gasy izy.
1.5cm eo ny tevin'ny lalotra.
Raha 100m ny halavan'ny tamboho, ka 3m ny haavony, dia 100 x 3= 300m² x2 = 600m² izany ny lalotra ambadika sy ambadika = 600m² x 0.015= 9m3 ny mortier ilaina.
Dosage 3 sy 1
Fasika 3 famarana
ciment 1 famarana.
Raha atao maivamaivana izy dia azo atao 4 sy 1.
Ciment 1 sac 50kg, fasika 150kg, rano 25l mahavita 20m² eo
Raha 600m² izany ny lalotra tamboho atiny sy ivelany, dia mila 30 sacs ciments, ary fasika malemy mbola sivanina 6-7m3 eo.
Raha ho lokoina ny tamboho, dia lokoy la chaux aloha izy mba hofohan'ilay rindrina voalalotra ciment, tsy andany loko.
Asio sira ilay la chaux, dia ampio ciment kely, mba tsy hanaraka fa hiraikitra.
Maina tsara vao lokoina peinture à eau extérieur mahazaka ranon'orana sy masoandro.
Jereo ny rendement peinture, matetika 0.5kg/6m²/couche, izany hoe 1kg eo zany mahavita 6m² raha deux couches.
600m² tamboho atiny sy ivelany izany, mila 100kg peinture.
Matetika vy no ampiasaina. 300 000- 400 000ar eo ny m²
Raha tiana ho tsara endrika izy dia asiana jiro isaky ny poteau, dia efa asio tuyau jaune andehanan'ny fil.
Raha atao solaire moa izy, dia tsy ilana fil fa ny support no atsatoka amin'ny poteau, efa kajio raha asiana vy kely mipoitra amin'ny poteau hametahana azy.
8 - Vidiny
Tombanana eo amin'ny 450 000ar/m linéaire ny tamboho amin'ny haavony 3m, mandray vita.
Izany hoe tamboho 100m ny halavany, ohatra tany mirefy 20m x 30m = 600m² = 6ara, dia mitentina 45 000 000ar ny tamboho manodidina mandray vita, hatramin'ny vavahady, tsy ao anatiny ny jiro.
Afaka manao ny asa fanamboarana hatrany ny Vitatsika Construction, na trano vaovao, na fanavaozana ny trano efa misy, na tamboho, manerana ny Nosy, mandray vita, misy garantie.
(Sary fanehoana Vitatsika sy nindramina)